We Fight We Win. -- " More than Media ": လက်ပံတောင်းတာင်အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်းအားကန့် ကွက်ဆန္ဒပြပွဲ
တိုကျို၊ နိုဝင်ဘာ ၃၀၊ ၂၀၁၂
လက်ပန်တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း (လုံးဝ) ဖျက်သိမ်းရေး
နိုင်ငံသားတိုင်း ( လူတဦးချင်း )မှာတာဝန်ရှိတယ် တိုက်ပွဲတွင်ပူးပေါင်းပါဝင်ကြပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့က မီးခိုးဗုံးများဖြင့်ဖြိုးခွင်းခဲ့ခြင်းအား ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲကိုအောက်ပါအတိုင်း
အချိန်။ ။ ညနေ-၃-နာရီ မှ ၄-နာရီအထိ။
နေရာ။ ။ရှင်နာဂ၀ါ-မြန်မာသံရုံးရှေ့  ။
We need to start anti Chinese protest through out Burma now.
29 November 2012 at 20:53